« Melok’ela » : Horonantsary ahitana ny fifankatiavan’ny zandary sy ny dahalo -
AccueilVaovao Samihafa« Melok’ela » : Horonantsary ahitana ny fifankatiavan’ny zandary sy ny dahalo
« Melok’ela » : Horonantsary ahitana ny fifankatiavan’ny zandary sy ny dahalo
13/03/2018 admintriatra Vaovao Samihafa 0
Hiarahan’ireo andrarezin’ny sarimihetsika malagasy. Vokatra voalohan’ny Tatatata Production, ny « Melok’ela », horonantsarimihetsika ahitana ny fifankatiavan’ny zandary sy ny dahalo. Horonantsary mitantara ny fifandraisan’ny fianakaviana roa, ka ny fianakaviana voalohany manana zanaka vavy, ary zandary no asany. Ny fianakaviana faharoa kosa dia manana zanaka lahy saingy dahalo izy io; nifankatia anefa izy roa ary teo no nanomboka ny votoatin’ny tantara. Toa ny mahazatra ireo mpilalao izay efa nanana ny lazany tamin’ilay horonantsary « Malok’ila », dia manana anjara toerana betsaka ao anatin’ny horonantsary ny fampihomehezana. Mitondra ny anjara birikiny ary maneho ny talentany ao anatin’ny « Melok’ela » rahateo ry Rajao (Tsarafara), Pasitera (Jocelyn Rakotondrafara), Raly, Fetra, Razoary, Rakotroka, Rebetsy… « Fanontaniana apetraky ny tantara ny hoe afaka hiaraka ve ny zandary sy ny dahalo manoloana ny fitiavana mivaivay », araka ny fanamarihana nentin-dRajao,dia anisan’ireo mpilalao sady ao anatin’ny famokarana ity tantara ity.
Teny Ambohijoky Fenoarivo no nanaovana ny fanatontosana sy ny fakana ny sary, ary nitondra ny anjara birikiny tamin’ny fanatontosana ny sarimihetsika io kaomina io notarihin’ny Ben’ny tanàna. « Nanao tolo-tanana ho anay ny kaominina ary ho tambin’izany dia efa in-droa no nalefa teny an-toerana io sarimihetsika io », hoy ihany ny fanamarihan-dRajao. Ankoatra ny hatsika na sy ny maha-fialamboly ny horonantsary, dia misy hatrany ny lesona entina sy azo tsoahana amin’ny horonantsary. « Ho an’ireo mpitantana antsika kokoa, ireo tompon’andraiki-panjakana toa ny ben’ny tanàna sy ny zandary no lesona », hoy ihany izy.
Fanamby ho an’ireo mpilalao tao amin’ny « Malok’ila » teo aloha ny namoahana ny « Melok’ela ». Tsy mifanalavitra rahateo ny teny mandrafitra ny lohatenin’ny horonantsary roa. Maro tamin’ireo mpilalao rahateo no efa nilaza fa efa tapaka ny fiaraha-miasan’izy ireo tany amin’ny trano mpamokatra nisy azy ireo teo aloha.